June | 2017 | Somaliland Hargeisa City
MA ISWAYDIISAY WAXA AY MUQDISHO, HARGEYSA UGA DAMAASHAAD WACNAATAY XUSKA 26 JUUN? WQ Mohamed Hagi
26 June, 2017 — somaliland1991
MA ISWAYDIISAY WAXA AY MUQDISHO, HARGEYSA UGA DAMAASHAAD WACNAATAY XUSKA 26 JUUN?
Hargeysa waa loo ga dabbaal-degay 26 June, Muqdishana si weyn oo ka fiican sida Hargeysa ayaa loo ga dabbaal-degay; iswaydiintu se waxa ay tahay; waayo? Maxaa keenay in Somaliland xornimadii ay gumaystaha ka heshay loo ga farxad badsado?
Sababtu wax kale ma aha e, waa in Muqdisho ay u dabbaal-degayso in ay ka mid noqotay ummadaha wax gumaysta! Muqdisho waxa ay gumaysatay Hargeysa oo iyadu midnimo rabtay iyo Soomaalinimo lagu badhaadho oo ujeedku yahay shanta Soomaaliyeed oo hal calan, hal dawlad iyo hal dhul leh.
Taa cakiskeeda Muqdisho midnimada waxa ay u aragtay in ay heshay dad iyo dhul habow ah oo ay ka manaafacaadsato; waana sababta keentay in midnimadu ay tammarin kari waydo oo ay noqoto hal bacaad lagu lisay.
Waa laga yaabaa in aad qariibsato, amma ay kaa daadegi waydo in Muqdisho ay Hargeysa gumaysatay! Haddii se aad si fiican u fahamto macnaha erayga gumaysi, isla markaana aad barbar-dhigto dhibkii Somaliland midnimada Soomaaliya ka soo gaadhay waxa aad garowsan doontaa in Muqdisho si baas oo daran u gumaysatay Hargeysa.
Eragyga gumaysi waa in xaqaaqa, rabitaankaaga ummadnimo, dammacaaga garasho iyo doonistaada hammiga ah la gaa hor istaago oo aad xor u noqon waydo garashadaada. Intaa iyo in kale oo dil, dhac, kufsi, xadhig iyo kadeed ahba waa laga mutay midnimadii fashilantay ee habaarka u dhalan-gaddisantay.
Somaliland waxa ay ka xorrowday gumayste, waxa se ay la midawday gumayste kale oo madaxa ka garaacay! Muqdisho waxa ay u dabbaal-degaysaa in ay heshay dad iyo dhul bilaash ah oo ay gumayso, adigu se maxaad u dabbaal-degi?
Ma in gumaysi cad aad ka hoos baxday oo aad gumaysi madow oo kun jeer kaaga daran aad u gacan gashay? Faa’idada ugu weyn ee taariikh laga helaa waa in cashar laga barto wixii la qalday shalay si xumaan loo ga samatabaxo, waana in tagtadu intii ay wanaag lahayd la kaydiyo oo la biiriyo.
Haddii se ummadi fahamka taariikhda ku guul-darraysato waa in qaladkii shalay la galay maanta iyo marar badan lagu celceliyo, halka hagaaggii shalay uu ab iyo abtirsiin beelo oo uu habaasku ciidda ku af-rogo. Madaxbannaanidii 26 June 1960, reer Somaliland ilays u baxay iyo iftiin ayey u arkayeen waaney ula ekoonayd. Xornimadaa hal ujeedo keliya ayey ka lahaayeen; waana in gumaystuhu tago oo Soomaali dawladnimo ku midawdo.
Arrintaasi waa ay isla rogtay, midawgii 1 July 1960 ee Jamhuuriyaddii Soomaalidu waxa uu noqday in mar labaad Somaliland la gumaysto! Weliba si aad u daran oo dhaxal-xumaysatay loo gumeeyo. Ujeedadii midawga oo ahaa in shan Soomaaliyeed la helo waa lagu khasaaray, Midawgaa waxa ay natiijadiisu noqotay in dawladnimadii Soomaalidu dhiig gacanta la gasho oo kuwii keenay midnimada abaalkoodu noqdo xasuuq cir iyo dhul ah oo aan loo aabbo yeelin.
Gumaysigii 76 sano ee Ingiriis ayaa janno noqday iyo wax dib loo gu baahdo, waayo 31 sano ee midnimada ayaa dhaxal-xumaystay! Waxa la xasuuqay maati, waxa la burburiyey xoolo, waxa la dhacay hanti, waxa la masaxay magaalooyin oo waxa la xaqiray ummad walaalnimo doon ah, iyada oo abaal loo ga dhigayo xadhig, kufsi, cago-juglayn dhul boob, isir tirtir iyo gunnimo nooc ay tahay.
In ka badan 60,000 oo waxba aan galabsan ayaa cir iyo dhulba lagu halligay. Dadkaasi waxa ay ahaayeen maati aan waxba gaysan; cid ay yihiin darteed se loo bartilmaameedsaday. Maalintii xornimada 26 June 1960 waxa laga dhaxlay dhib iyo silic kii ugu darnaa ee ummad la mariyo.
Inkasta oo ay madaxbannaanida gumaysi laga xoroobayaa tahay sharaf, haddana in gumaysi cad oo wax xeerinaya aad ku beddelato mid madow oo aad jinsiyad bidday se ah axmaq ka xun kun jeer gumayste aan kula diir, af iyo diin ahayn waa mid mudan in aan waligeed la ilaabin haddii xilkasnimo iyo damiir xasuus oggoli jiro.
Anigu shakhsiyan 26 June waxa aan u aaminsanahay taariikh. Tagto in garashadu i farayso in mar danbe aannan degmin oo nacasnimo hodmin. Tagto in aan dal la mid ah dalalka kale ee xornimada helay aan ahaa; se aan nacasnimo holladay oo waayo-aragnimo la’aan yari kufay.
Si aad u rumaysato warkayga bal eeg Jabuuti sida ay xornimo u heshay ee ay u adkaysatay iyo sida ay u badbaaday ee ay u samatabaxday. Maanta miyaaney saddexdii midnimada ka hadhay ka wacneyn Xamartii midnimada khiyaantay; halka ay Hayrgeysi ka raysatay 26 kii sano ee ay mooganeyd gumaystaha walaalka u eg ee riyadii midnimo xabaalay!
Somaliland cashar xanuun badan oo wax lagu qaato ayaa soo maray; waa se sida aay uga faa’idaysataa! Waxa aan idin leeyahay walaalayaal ka digtoonaada booraan haddimo iyo midnimo afka ah oo been ah. Soomaaliyana waxa aan leeyahay, dadku ma aha xashiish cab dib ugu xiisoonaya xumihii aad baddeen iyo silicii aad walaalnimada ku dooriseen waa halkii Abwaan Dheeg eh. Ciid Wanaagsan.
Waa xusuus qorkii mujaahid Cali Gurey XUSUUSIHII CALI GUREY (MAY 1988kii)
15 June, 2017 — somaliland1991
· den 4 juni kl. 01:18 ·
qayb ka mid ahayd taxanihii 4 sanadood ka hor aniga oo Addis Abbaba joogay aan qori jiray
Abaaro 8dii fiidnimo ayaan soo gaadhay Kaam Barwaaqo anigoo ku socda Xarshin. Waxa i joojiyay Mujaahid Cabdi Cawar iyo mujaahin kale oo tubnaa wadada badhtanka Kaamka marta. Cabdi cawar ayaa yidhi halkeed ku socotaa goortan. Waxan idhi dhawr habeen baan soo jeeday oo waxan is leeyahay caawa aad Xarshin si fiican isaga seextid. Weger, Xarshintaa ba kala dhacday, miyaanad ogeyn in taliskii qaybta 26aad saraakiishii sii oo Morgan hor kacayaa ay Jigjiga yimaadeen maanta, galabtana ay Helocopter ku yimaadeen Xarshin. Waan qiyaasi karaa maanta oo bisha April ay 15 tahay kuna buuxdo mudadii halka bil ahayd ee kala durkinta ciidamadu in Saarkiisha Somalia aay jigjiga hawlahaasi u iman karaan iyaga iyo kuwa itoobiyaanku ay wada jir u mari karaan
jiidaha xuduudka u dhexeeya labada dal, lakiin hadii ay jirto waxa iga yaabiyay waxa ay ka soo dooni karaan Xarshin oo iyadu sodoneeyo kilomitir xadka ka saraysa. Si kasta ba xaalku ha ahaado eh intii aan anigoo gudoodi ah Xarshin geli lahaa een dugaag jalo butaynaya juq u odhan lahaa waxan ka door biday in habeen kale oo soo jeed ah aan ku dhaxo Kaam Barwaaqo.
Waxanu is raacnay Cabdi Cawar oo waxanu la fadhiisanay Alleh ha u naxariisto eh Sheekh Sancaani iyo xertiisii oo fadhiyay derged yar oo dhinaca waqooyi kaga soo jeeda wadada baaburka aan saaraa uu taagnaa ee badhtamaha Kaamka. Sheekh Sancaani waa sheekh wayn oo caan ah oo aad looga yaqaan Somaliland. Wuxu caan ku yahay qasiidada ramadaankii afurka hortii idaacada Hargeysa ka baxda ee loo yaqaan ” YAA TAWAAB”.
Laakiin sheekha wax ku dhacay ba ma hadli karo oo codba kama soo baxo wakhtigaa. Waxaa sheekha agtiisa fadhiya oo dhinaca midigta ka fadhiya nin marka uu sheekhu doonayo in xerta uu wax u dheego, ninkaasuu afka dhegtiisa intu u dhaweeyo ayuu isna kor intuu hadalka uu qaado yidhaa sheekhu wuxu leeyahay sidaa iyo sidaa. Sida caadiga ah sheekhu marka uu ninkaa dhegta wax u saarayo waa la wada aamusaa oo waxa joogsata wixii sheeko ah ee kale ee markaa soctay.
Habeekaa markii aan in yar fadhiyay ayuu sheekhi dhegta wax u saaray ninkii, dabeed ninkii na intuu codkii sare u qaaday intii kale na aamustay ayuu yidhi ” sheekhu wuxu yidhi allahayow ninkaa ugu dambeeyay ee soo fadhiistay maxaa cadho haysa”, inta mar qudha xagaygii loo soo wada jeedsaday ayaa qosol la daatay. Waxan is idhi malaha sheekhu gadhkan aad cidida ku rifayso ee dhinaca dhan banaysay, iyo foorar kaaga, iyo aamuskaaga ayuu ka yaabay.
Subaxnimadii ayaan ka kalahay Kaam Barwaaqo oon galbeed u dhaqaajiyay anigoo is leh Xarshin marka aad Kontrolka gaadho ayaad ka saadaalin xaaladda ilayn nin Bacaysan baan ahaye. Markaan soo gaadhay Kontrolka Xarshin maan dareemin wax aan caadi ahayn. Makii xafiiskii gaadhay waxa la Ii xaqiijiyay in Saarkiil ka socotay qaybta 26aad ee ciidamada Somalia ay soo gaadheen Jigjiga lakiin Xarshin aanay jirin cid timi. Xalay iska soo guuree lahaydee oo gurigaaga iska seexo. Sawkii habaarkii Cabdi Cawar i helay ee bacda ugu xidhay. Imika xarshin in aan dhaafo mooyee ma fadhi baa ii yaalay
Xarshin kumaan raagin ee hoos iyo wadadii qudhaca ayaan cagta saaray. Weli waa aniga iyo Mujaahid Caqaar oo baabuurka ii waday iyo labadii mujaahid ee nala socday oo sidii noolz socda.
Waxan sii maray Qudhac Raamaale, ka gudbay waxan tegay wado bariis ka dibna galbeed ayaan fooda saaray waxan socday ilaa iyo Lafo Islaameed oo ahayd bartii labaad ee riwaayadii dib u soo raritaanka ciidamada. Intaa soo dhan waxan u socdo waxaa ugu muhiim san in aan u xog waramo saraakiisha qaybta iyo horjoogayaasha colalka ee aan ugu kalsoonida badanahay ama muhiimka u hawlaha aanu markaa gacanta ku haynay.
Anigu waxan uga xog waramayaa Kulankii Kaam Abokor iyagu na waxay I siinayaan xogta cadawga, gaar ahaan dhaq dhaqdhaqaaq yadii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay ilaa shalay intii aan maqnaa. Mujaahid Cabdikariim Xxashi, mujaahid Gacmo dheere Mujaahid Aden Dhamac, Muj. Washington iyo intii kale ee muhiimka ahayd waan la wada kulmay midba si aan ula kulmay iyo meel aan kula kulmay ba. War iskuma kaayo seegana lakiin talo ayaa isugu kaayo laaban.
Laba todobaad ayaa laga joogaa kulankii Kaam Abokor wax nacno leh oo is bedelayna ilaa hadda ma jiro. Waxa maalmahan dambe isa soo tarayay in Guoomiye Silanyo uu ku hawlan yahay sidii loo soo deyn lahaa saraakiishii galbeedka ee xidhnaa. Dhinaca kale taliska guud wuxu soo qaybiyay qoraal , aanan u qaadan anigu lakiin malaha amar dagaal loogu talo galay. Waxan u sida u leeyahay wuxu ka koobnaa laba ama sedex warqadood oo gacan ku qoran oo aan wax faahfaahin ama tafaasiil ah wadanin.
Hadii aan luqada milatariga ku idhaahdo qoraalku ma ahayn “Kaarto Dagaal”, iyada oo waxa looga fadhiyay Taliska Guud uu ahaa inu la yimaado qorshe ay ahayd inu noqdo kii ugu baaxdda waynaa ilaa intii ay bilawday dagaalka hubaysan 1982kii ama 81kii ba.
AHN Muj. Gacmo dheere ayaanu iska raacnay Xarshin dagaalku na maalintii labaad ayuu Burco ka socdaa. Fiidkii ayaanu isu soo dhamaanay anaga 16 mujjaahid ah, oo u badan kuwii xaga sahanka iyo wardoonka ka shaqayn jirtay, intooda badan na aan is leeyahay Muj. Gacmo dheere ayaa isagu gacantiisa ku soo wada xushay runtii na waxay ahaayeen rag adag oo isku kalsoon. Markii aanu ku soo wada dhamaanay goobtii bar kulanka ee aanu ka dhaqaaqay nay waxa isagu na goobtii noogu yimi Muj. Maxamed Cilmi Samater, taliyihii Gt. Sayid Cumar si uu u xaqiijiyo wadada colwaynuhu ka soo geli doono xadka oo gelitaanka yagu sahan u noqonayo. Waxanu isu qaybinay laba landcruiser dabeed fiidkiiba waanu dhaqaajinay isaga oo Muj. Maxamed Cilmi iyo ilaaladiisii gaarka ahayd na la socoto.
Mixnadda ugu adag ugu na dhibaatada badan waa sida aanu kaynta la yidhaahdo dabataxanta uga gudbi karno anaga oo aan wax wado ah marin. Masaafadu waa ilaa sideed kilomitir oo ka bilaab maya xadka ilaa booraanta faaf. Marka xaga waqooyi laga yimaado ee la soo dhaafo Sheekh Moodle hadii aad baabuur wadato may jirin wado toos ah oo xadka u mari kartaa hadii aanad ama bari u qaadin wadada tagta Syla galbeed ama aanad galbeed u qaban ta Cadaroosh marta. Aniga iyo mujaahidiin kale oo ka tirsanayd kooxda sahan qaarkood noo may cusbayn halka aanu ka gudbayno iyo guud ahaan mashaqada hirigta kaynta shareeran ee dabo taxantu.
Lakiin waxa dhamaantayo noo cusbaa in aanu goobta ugu adag baabuur ku hawaysano, waayo kayntu waxay u badan tahay sogsog fooda is dartay. Marka aanu lugta nahay in laba qof is barbar gashaa may ahayn wax suuroobi kara ee waxay qasab ahayd in mid mid la isu dabo galo. Qodaxda sogsogtu waa shaqaabad, maaha sida ta galiilka, maraaga iyo qudhaca oo kale ee fiiqane waa ilko yar soo qaloocan oo halka ay kaa qabsato jidh iyo maro ba way goosanaysaa.
Sidaa daraadeed dadka ku nool ama xoolaha ku raaca hadaad u fiirsato jidhkooda waxad ku arkaysaa xagtimo dhaadheer oo ku wada yaala, siiba gacmahooda iyo xataa lugahooda. Waxa ugu daran qofka macawsta xidhin iyo dumarka oo hadhka maalin wayn ay kolba laani isku marayo habeena daa hadalkii.
Si dhib badan ayaanu qadar saacad ama ka badan ah kolba meel jiq ah isku qaadaynay. Baabuurta indhuhu way bakhtiisan yihiin, dayax ma jiro, waxanu ku guday naa waa xidigaha. Inta dusha saaran waxa u dhamaaday rafaad. Jimbiyada waa laga fogaanayaa sagxadda ayaa sidii kaluunka saaradiinka la is dul rasaysan yahay. Oo miyaa lagu nabad gelayaa intaa kolba mid bay goosanaysaa oo aada haya, kola darawalka canaana naya oo demenka tumaya, oo miyaa loo joojinayaa weligiiba ha cabaado. Anaga oon bir iyo bes doonayn ayaanu aakhirkii ka dhex dusnay daba taxantii iyo booraanteedii faaf ba dabeed na halkaas ayaanu baabuurtii kaga daadanay. Maxamed Cilmi iyo colkiisi waxay la noqdeen baabuurtii anagu na halkii baanu lugta ka soo qabsanay oo Sheekh Moodhle foolka saaray markaanu in yar u soo jirnay na xaga bari isu yar barbari nay.
Waxanu cagta saarnay wadada la yidhaa Fahda. Marka aad gudcur habeen gudayso waxad tahay uun sanqadh dhegeysi oo dhegta ayaa indho na kuu ah, marka ay colaad tahay na habeenkii waa sanqadh la’ oo sida aad ku garan karto halka aad marayso in cidi taal iyo in kale way adag tahay gaar ahaan marka habeenku gudcur yahay, waxa na ugu sii daran marka dhulku duud yahay eenu ban ahayn. Nasiib wanaag markaanu la gudboonayn Sh.
Moodle ama in yar uu dhaaf nay ayuu dayixii soo baxay hal baarkeed intaanu gaadhin ayaa durba wax noo kala muuqdeen . Marka arladu cabsi tahay habeenkii waa sanqadh la’ hadii halka aad marayso ay reero yaalaan sawaxan iyo buuq ma leh, ortii ciyaarta ee xiliga nabadda oo meel dheer aad ka maqli lahayd lama ogola oo dunidu waa yeedhaa dem. Waxa ugu daran marka habeenku gudcur yahay duud na aad socoto ee orgi qalaaday iyo tu inan ah oo caways dambe qoosh garaacaysa aad u dheg taagto eed wehel ka dhigato.
Reeraha wadada Fahda ka degin itooda badani maaha reer guuraa ee waa degaan ka caano diiqa Hargeysa mujaahidiinta kooxaha sahanku na iyaga ayaa ugu dal yaqaan san Ciidanka Xoraynta mararka qaarkood na waxa xoojiya dal yaqaano khaas ah( area specialists) oo ka soo jeeda degaanka la dhex marayso waayo aag cadaw( enamy area) waxa muhiim ah in aad si fiican u taqaan degaanka dadka iyo dhulka gaar ahaan marka aad jebhad tahay, waa na in aad cid qarsoon ku leedahay waanay jireen oo waanu ku lahayn. Lakiin caawa jiidan hore oo dhan uga maanu baah nayn in aanu cid la kulano warka aanu ka hayno ayaa nagu filaa, waxa na ugu muhiim sanaa ciidankii Sheekh Moodhle oo laga raray, taas na waanu haynay marka hore na ciidan yar buu ahaa oo aan Col Waynaha is hor taagi karin.
Hadii uu fadhiyi lahaana inta aan ciidanku soo gaadhin in laga sii takhaluso ayay noqonaysay. Jiida waxa ciidan ahi kuma soo korodhin wadada aanu hayno ee Fahdu na haduu cadawgu mid fakaraya yahay markii Burco la galay ba waxay ahayd inay xidhaan oo ciidan adag dhigaan. Waayo Sheekh Moodhle iyo jiida ku beegani waxay u dhaxaysaa laba ciidan, ka Bali Cabane iyo ka Cadaroosh oo midba uu hal urur yahay inta badan na waa jiid uu midba kan kale ku haleeyo ama ay isku riix riixaan marka ay ku murmayaan aagagooda waajib.
Muj. Gacmo dheere Nikab ayaa jilibka ugu jira nasasho dheer ka dib waxaad moodaa inay wax tartay oo waxooga uu ladnaaday. Waxa xusid mudan Burco oo dagaalki maalintii sedexaad ka socdo iyo hadana Radio Hargeysa oo aan isagu badaa ba hayn. Waxa ka socda dhaanto ” QARSHO WEEYEE, QARSHO WEEYEE QALBIGU, ARMUU IGU QARXAA! .
Intii aanu xidhka isku qarinay nay tiraba laba jeer ayay na kor haadeen diyaarado miig ah oo ku duulaya joog hoose dhinaca xadka na ku socda. Waxay taasi muujinaysay in cadawgu war helay ama shakiyay ama ba qiyaasay in uu jiro weerar ku soo wajahan Hargeysa. Kolay calaamad wanaagsan may ahayn ee waaxay ahayd calaamad xun anaga na markii dareen shaki ayaa na galay, hada na wax aan la fili karin may ahayn in cadawgu bilaabi karo tabaabushe hor leh uu kaga hor tegayo weerar ay xoogaga SNM ku soo qaadaan fadhiisimadooda magaalada Hargeysa dhexdeeda ah oo dabcan ay garan karayeen in xoogaga SNM ay bar tilmaameedsan doonaan hadii ay u suurto gasho inay soo gaadhaan magaalad.
Qodob ka mid ah qodobada ugu muhiimsan mabaadiida dagaalka( principals of war) oo la yidhaa Mabda’ kediska( principal of surprise) ayaa xusaya in muhiim uu yahay ka naxsiga cadawgu marka aad weerarayso(surprise attack). Nasiib wanaag ciidankii Burco galay iyo kii Cadaadlay galay labada ba way u suurto gashay, laakiin Hargeysa sidii lagu galay, mid ka mid ah mucjisooyinkii dagaalka uun dheh.
Gabal dhac maanu sugin eh casarkii ba waanu dhaqaajinay . Intii aan cadceedu dhicin waxanu ka talawnay wadadii Gadh Yogol ee dalcada Ina Naxar ka soo baxaysay dabeed na Karin Shabeel ayaanu ka dhaadhacnay. Wax yar ka dib ayaanu jihadii waqooyi eenu intii hore oo dhan u soconay bedel nay oo bari u jiifinay iyo xagii Hargeysa.
Muj. Gacmo dheere oo intii hore oo dhan ladnaa ayaa jilibki bilaabay xanuunkii in hadba sidii loo jabo loo dhutiyana markaa dan baa tidhi. Waxanu dhaqaaq joogsano ba, wuxu na daba luudaba goor ay cawayskii tahay ayaanu daf u soo nidhi Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muxumed Gadh Yogol oo tuulada Xareed degan. Sheekhii is waraysanay ilayn waa ahlu laahi markii ba na faham xaaladii Hargeysa iyo wararkii ugu dambeeyay na nagu taabay. Hadana mid xerta ka mid ah dir oo yidhi waar taw dhehoo baskii Hargeysa ka soo galay darawalkii waday u yeedh dabeed isna loo yeedh oo warkii noo sii faah faahi. Intaasi markii ay dhacday tashanay anaguna.
Markaanu wax is la eeg eegnay waxay noqotay in aanu isu qaybino laba kooxood, koox Hargeysa gasha oon tiro ahaan badnayn iyo inta kale oo toos u abaarta xeryaha qaxootiga ee Laas Dhuure iyo Agabar oo marka la isu geeyo ay ku nool yihiin qaxooti 50,000 ilaa 60,000 oo qof ihi. Labada xero waxanu haynay sankooda oo sugan oo waanu ogayn in laba rugood oo bilays ah waxaan ahayn oo ciidanihi aanu degenayn. dhinaca kale na waxanu is tusnay khatarta ay ku noqon karaan ciidamada SNM marka dagaalku Hargeysa ka qarxo. Sidaa darteed inta goori goor tahay waa in labadaa xero ba ay xidhmaan qaxootiga ku jiraana ay budulka jeexaan ilaa iyo halkii ay markii hore ka yimaadeen, Itoobiya.
Muj. Gacmo Dheere oo isagu kooxda hogaaminayay ayaa xaadiri yay magaacda inta magaalada gelaysa waxanay ahaayee.
1. Muj. Maxamed Xasan Gacmo dheere
3.Muj. Yussuf Gadhle( Sh. Sancaani)
4.muj. Cisman Owrliqe
5muj. Axmed Dhako iyo
Tobanka mujaahid ee kale iyagana waxa ka mid ahaa
1. Muj. Axmed Jabaan
2.Muj. Muxumed Cali Indho case
3.Muj. C/qaadir Muxumed Aw Axmed
4.Muj. Maxamed Dacar Ibraahim
5.Muj. Cali Mirqaan
Markaanu xog waraysiyadii dhamaysanay eenu is qaybinay wixii aanu is faraynay na is farnay, ayaa intuu Sheekhi noo sii nabaadino xidhay aanu lixdayadi na galbeed iyo xaga Hargeysa u dhaqaaq nay tobankii kale na waqooyi afka saareen ka dib markaanu halkii isku sii wada maca salaamaynay. Muj. Gacmo dheere anaga ayuu nala socdaa runtii wuxu ku socdaa waa istiil iyo adadayg uu u dhashaye raga qaar hadii uu la mid yahay wuxu na odhan lahaa waar aniga socod iguma jiro ee halkan sheikha agtiisa igaga taga waana halka keliya eenu ku aamini karaynay.
Kolay caawa in aanu Hargeysa galaa noo la’ waayo waxay noqonaysaa goor dambe oon geli taankayagu wax macno leh samayn karn. Sida aanu xogta ku hayno magaaladu waa bendoo, inta aanaan daf odhan waxa muhiim ah in marka aanu duleedkeeda gaadho, xidhiidho samayno ka dib na markaa xaaladda si dhab ah u qiimayno kuna go’aan qaadano.
Goor habeenka niskiisii dambe ah ayaanu soo gaadhnay Xaran oo ah tuulada ugu xigta Magaalada ee dhinaca ku haysa xaafadda Boqol Jire. Waxa joogay oonu la xidhiidh nay laba nin oo kolay anigu aanan markaa aqoon hore u lahayd, waa Xaaji Koobali iyo Gurey Caydiid labadooda ba Alleh Ha u Naxariisto eh. Xaraf waxa degenayd guutada 24aad oo ahayd kaydka qaybta 26aad, kuna xooganayd gawaadhida gaashaaman ee loo yaqaan BByada. Lakiin xeradii 24aad habeenkaa way haawanaysay xogna waxanu ku helay in xaga masalaha loo qaaday, FII SHII! .
Masalaha hadii loo qaaday makaanu galabtii wadada Koore Qaada ka soo gudbay nay macnuhu waxa weeye markaa waxay naga xigtay galbeed iyo dhinaca Hargeysa, taasina dhibaatadeeda ayay yeelan kartaa waayo marka col waynuhu wada Fahda soo qabsado ee joogo Koore Qaada halkaanu anagu hadii uu galbeed u raaco waxay is heli karaan 24aad oo jid gooyo ah. Sheekh Moodhle oo anagu aanaan ciidan ku soo dhaafin laftiisa waxa lagu sheegay ciidan. Ciidankaasi in uu yahay 24aad iyo inu yahay ururkii Cadaroosh iyo inoo meel kale ka yimi lama kala sheegin.
Xaraf waanu dhaafnay boqol jire oo xaafadda ugu galbeedaysa magaalada ahna maanu gaadhine intaanu wadada dhanka waqooyi uga baxnay ayaanu meel aanu isku qarino galay sidii xalay ba aanu yeelay. Maalintii oo dhan lixdaydii halkii baanu ku jiray waxa na arkay na nin dhalin yaro ah baa jiray isagii na halkan agtayda ayaanu ku xidhnay. Ha xidhnaado anaba waa xidhanahaye!
Gidiga maanlintii madaxayga waxa ku wareegayay arin keliya waxanu ahaa diyaar garawga ciidankii Hargeysa iyo goorta uu soo dhaqaaqayo. Burco maalintii afraad baa lagu dagaalamayaa. Cadaadlay na waxa la galay shalaynimo laakiin anagu warkaa ma hayno. Qorshihii hore ee aniga iyo Gacmo Dheere ogayn yoolalka ugu muhiimsan ciidanka cadawga wuxu ahaa dhinca galbeedka Taliska Qaybta 26aad iyo Birjeex dhinca bariga na Airport-ka iyo Dabada cadaada oo ku talogaku yahay in qaybta 4aad na ay labada galbeedka weerarto, qaybta 3aad na labada Bariga weerarto.
Lakiin xaaladuhu way is bedbedeli karaan. Mar hadii Burco la galay mujaahidiinta kale ma aqbali karaan, duruuf kasta oo jirta , in meel iska taag naadaan iyada oo mujaahidiin toodii kale ay Burco ku dhex dagaalamay
Waxan xusuusa nahay dagaalkii buu raha ee 84kii arimaha ugu waynaa ee ku kelifay ama soo dedejiyay in ciidamadii dhinca galbeedku ay qorshe la’aan iska dhaqaaqaan oo weli ba
aag cadaw ka galaan iyagoon waxba qiimayn waxa ka mid ahaa geeridu Lixle markii loo hsoo sheegay.16 kii oktoobar, oo ahayd maalin ka hor dagaalkii Burco Duuray waxan ka mid ahaa mujaahidiintii ugu dambaysay ee Xarshin ay ku sii wada qayilaan, isaga oo ka yimi galbeed oo u socda Burco Duuray iyo guutadii Sayid Cali oo wax yar ka hor uun ka soo baxay dugsigii Aware.
Mahdi Isxal iyo Axmed Koosaar Faarax Jire oo labadu ba Aleah ha u naxriisto ka mid ahaa Mujaahidiintii dagaalkii buuraha ku shihiiday ayaa ka mid ahaa inta mujaahidiintaa aanu Lixle la wada fadhiisanay. Waxan gaar ugu soo qaadanayaa waxay ahaayeen labada noogu cadifiyadda badnaa ee geeridii Lixle ay sida waalida ah u hiyi kicisay. Alleh ha u naxariisto eh waxan xusuutaa hadalkii ugu dembeeyay ee Muj. Lixle intii aanu bari noo dhaafin oo labadooda ba ay kaga dhiganayd ilaa aanu dhqaaqay nay. Hadalkaasi wuxu ahaa, WALEE ANIGA IYO FAQASH AYAAN QAAXO ISKU HAYSAN.
Hadaba, maanta oo ta taagin ay tii maalintaa ka sii daran tahay waxan garan karaa ciidankii galbeedku inu xakame ruug yahay shil mooyee shil laana uu badhtamaha Hargeysa mar hilaacin doono dhakhso na tahay. Sidaan filayay na maalin shanaad dib uma dhicin.
Casrkii ayaanu ninkii na siidaynay anaguna xaafadda boqol jire ee galbeedka Hargeysa daf soo nidhi. Muj. Gacmo Dheere nin uu garanayay ayaanu doonaynaa in aanu ku hagaago. Galaabtaas oo dhan waxa nala socda shimbirka la yidhaa Baaz-ka oo ahaa saaxiib qaali ah Hadii aan idhaahdo isaga ayuu ahaa cidii nagu hagtay halkii aanu doonaynay yaa iga rumaysanaya.
Wuxu nala socdo ba markii dambe ayuu geed halkana iska fadhiistay markaasuu Gacmo dheere yidhi waar waxan u malayn nayaa in ay joogno eh halkan bal ina fadhiisiya. Maxaad ku garatay makaan waydiiyay intii farta ku fiiqay Baazkii ayuu yidhi sawkan ina hor fadhiistay, sidii baanay noqotay
DIB WAXAY KA NOQOTO BA
BELOY DOORKA MAANTA AH
ADAAN DAACAD KUU AHAY
HADII LAGU KAA DIRO
DIGASHAAN KA DHIGAYAA
ADNA DIID QOF KULA FAQA
Muj. Gacmo dheere AHN eh ayaa Muj. Khadar cid u diray, wax yar ka dibna nin baa noo yimi nooga waramay arimihii ugu dambeeyay oo dabcan noqonayay macluumaad uu bixin karo qof shicib ah oo caadi ihi.
Wuxu ka waramay in gelinkii hore shan baabuur oo browno ah lagu xidhay sameecado kuna wareegayeen magaalada iyagoo dadka u sheegaya in laga bilaabo sedexda galabnomo ay magaaladu bandoo tahay qof gurigiisa ka soo baxa iyo gaadiid socon kara ay mamnuuc tahay. Dadka waxa bandooda looga sheegay shantaa baabuur eh wax ciidan ah oo dhex jooga magaaladu ma jiraan kol ay roondo ilaalinaysa bandooda tahayna, hadana dadku sedexdii galabnimaba way xaroodeen waxa xereeyay na waa baqdin uun eh hal askari ma dhex joogo xaafadaha.
Wuxu yidh” anigaa galabta soo dhex maray oo dusha ka soo wareegay cid I joojisay na may jirin shantii brawn ee micrifoonada lagu xidhay shantii ba waxan ku sii dhaafay xero digaagta, hadaanu gabalku dhicin idinka laftiinu halkan ba waa ka raki lahaydeen. Wuxu yidhi ” sidii Burco loo galay nimanki waa wisiisi oo waxay bilaabeen xadhig aan loo kala aabo yeelayn haday sii socoto na waxan is leeyahay nin reer Sh. Isaxaaq ah oo hebel la yidhaa oo la badbaadayaa ma jiro.
Nimanku waxay ugaadh sanayaan odayaasha magaca leh, ganacsatada, aqoon yahanada, madaxda cid ay reebayaan ma jirto. Markaanu waxoogaa halkii ku sheekay sanay eenu ku shaahaynay ayaanu ninkii odayga ahaana fasaxnay anaguna xagii magaalada u dhaqaajinay . Halkan xero digaagta markii hore eenu Muj. Gacmo dheere isla eegaynay yoolalka muhiimka ah ee cadowga waanu ku darnay. Waxanu isla qaadanay in ciidan aan ka badnayn boqol mujaahid oo gaar ah u qorshayno xero digaagta, waayo waxa yaalay lix qori oo madaaficda 100mm ah( waa qoriga taangiga ruushka ah) .
Lixdaa qori waxay u dhigmi kareen lix taangi oo dhulka yaala, hase ahaato eh markii dambe een u bandhigay Muj. Ibraahim Dhega Wayne, isagu xero digaagta iyo yoolal kale oo markii hore aan Gacmo dheere ku qanciyay isagu wuxu ka qabay aragti kale. Wuxu igu yidhi ” iska dhaaf kuwaa yar yar oo dhan hadii aynu kuwa waawayn qabsano iyagu macno ma yeelanayaan eh”
Kuwa waawayn wuxu uga jeeday dabcan, taliska qaybta, birjeex, airportka, iyo dabada cadaada. Waxan is leeyahay Ibrahim wuxu malaha tixgelinayay in xoogu goobo xadidan ku dhaco oon qayb qayb samin.
Marka ay tahay kadimada magaalada laga geli karo Mujaahid Khadar oo ka noogu da’da yarna ahaa ayaa noogu aqoon badnaa waayo wuxu ka shaqasan jiray jaadka oo magaalada lagu geliyo kootarbaan ahaan. Markaa jaadluhu waxay si fiican u kala barteen tubaha ugu haboon ee dhuumasho magaalada lagaga geli karo, is bedbdel koodana waxay ula socon jireen si joogto ah.
Waana sababta ugu muhiimsan ee mujaahid Khadar uga mid noqday kooxdii uu Muj. Gacmo dheere gacantiisa ku soo xushay. Intii xero digaagta oo bari noogu toosan aanaan gaadhin ayaanu mid oo hawd quman ah in aan badnayn u soconay ilaa aanu gaadhnay wadada galbeedka ka marta State House-ka oonu kor ama waqooyi u raacnay.
WQ: Mujaahid Cali Gurey
19513208 Sabah Hassan Nuur, Ahmed-zaki Daahir Xasan och 206 andra
Liban Mawel Mujaahid Cali Gurey Run Sheege Aan Xaqiiqada Dhabta Ah Ka Leexan
· den 4 juni kl. 01:22
Ali Yussuf “Mujaahid Talyaani isagoo dareen kayga ka akhriyaya wajigayga wuxu u adkaysan kari waayay werwerka iga muuqda iyo. Duruufaha gaarka ee igu xeeran si fiican ayuu u fahamsan yahay. Si uu kalsooni dayda u soo celiyo ayuu yidh” Dhegeeso Caligureyow, wixii …Visa mer
· den 4 juni kl. 01:26
Ali Yussuf Waa markii aan ka soo noqday Kaam Abokor iyo shirkii Taliska Guud ku qabtay
· den 4 juni kl. 01:27
Nouh Mire har svarat · 1 svar
Ali Yussuf Ma jiro baan filayaa qof ka mid ahaa masuuliyiintii sarsare ee SNM oo iska daa wax kale eh diyaar u ah inu xusuustiisa dad gaar ah mooyaane la wadaago dad nooc walba leh oo uga soo bilaaba Maalintii uu mawlay heshiiskii Itoobiya iyo Somalia halkii uu joogay iyo ilaa Burco iyo Hargeysa la soo gelayay. Waayo waxay ahayd xiliyadii ugu adkaa SNN
· den 4 juni kl. 01:33
Mohammed H Hugur har svarat · 1 svar
Cabdirisaq Abdi Runtii waa xusuus qor ay ceegagto xogo aad u mihiima oo u baahan in la weeleeyo mujaahidkuna waa ku mahadsan yahay inuu inoo reebo dhaxal aan duugoobin lkn waxa dhalinyarta ku waajiba inay Muj Ali ku dhiirigaliyaan kana caawiyaan qoraalka iyo keydinta …Visa mer
· den 4 juni kl. 01:36
Ahmed Abdo Gass Carab Jaziiratul Carabe jooga ayaabad u eekayd.
· den 4 juni kl. 01:37
Ali Yussuf Sawirku waa Xarshin gurigii Maxmed Cilmi Samater 87/88
· den 4 juni kl. 01:50
Caaqil Abdirahman Caaqil Xaashi Mujaahid cali taariikh qaaliya iyo halgan adag ayaad nooga sheekaysay sanado badan ilahay ha u naxariisto inti ku dhimatay mujahidinta intiina noolna cisi iyo sharaf ku noolaada
· den 5 juni kl. 00:00 · Har redigerats
· den 4 juni kl. 02:02
Sadat Adan Osman Ali Yusuf. More thanks sida xusuustu tahay iyo hagarbaxa taariikhed
· den 4 juni kl. 02:29
Xaji Abdirahman Aadan Dhamac Mujaahid Ramadan mubarak. Book waa in aad ka qortaa inta aad ka xasuusantahay wakhtiyadii adkaa ee idin soo maray.
· den 4 juni kl. 02:30
Ahmed Abdi Egeh Ilahy ha ka jasi siiyo waqtiga badan ad ku bixisay qoralkan ad banan kugu mahadnaqaya…
· den 4 juni kl. 02:34
Mo Iimaan Caloow taariikhda sheekh Sancaani dee bal mar yara gal..
· den 4 juni kl. 03:05
Al Waleed Bin Mohamed Half ki danbe ee markad saa kab usaartay adoon tii kale saarin ay qeybtu hillaacday
· den 4 juni kl. 03:53
Askar Tayasiir Muj Ali Yussuf dhadhan macaan baan ku hayaaye fadlan noo sii wad musalsalkaa gudagalkii dalka. Ilaahay ha u wada naxariisto mujaahidiintii dhammaantood
· den 4 juni kl. 04:36 · Har redigerats
Madar Hassan John Taariikh qaaliya iyo halgan adag ayaad nooga sheekaysay alle ha kaa abaal mariyo waanad na furtay
· den 4 juni kl. 04:47
Mona Mawliid Muj Ali yussuf waad ku mahadsan tahay taariikhda aad noo soo gudbisey . Ilaahay haw naxariisto dhamaan mujaahidiintii qaliga ahayd
· den 4 juni kl. 07:27
Cabdirisaaq Maxamed Alle Haku Karaameeyo Muj Ali Yussuf Ixtiraam Badan Ayaanu Kuu Haynaa, Ifka Hibo Ku Noolow Aakhiro Halkii Roon.
· den 4 juni kl. 07:45
Caalin Jamaal Mancha alleh
Waa tariikh mudan inla xuso
Alleg cimriga iyi caqliga haku dayo muj
· den 4 juni kl. 08:39
Adan Cawl Nasir ilayska kuwii shidow ilahay haydinka abal mariyo
· den 4 juni kl. 11:18
Ähmëd Äbü Shäibä waa wax l xuso qadhaadhka adag eed soo markteen ka mujaahidiin ahaan.
Waxan kaa codsan lahayn inaad noo daabacdo taariikhda SNM waayo maqal dhagoodka waxa ka saamayn badan akhris qoraalka kana jiritaan badan. Mujaahidiinta kala kama sheekeeyaan waayaha…Visa mer
· den 4 juni kl. 12:09
Mustafe Jamal nin raggi wuu garanaya doqona loo sheegi maayo
· den 4 juni kl. 16:19
Hamse Ibrahim Abdilahi ilahay ha u naxariisto inti ku dhimatay mujahidinta intiina noolna cisi iyo sharaf ku noolaada
· den 4 juni kl. 16:52
Sacad Ahmed mujahid Ali Yussuf sharaf ku noolow camiii adi inta ka nool mujahidiintii SNM iyo kwii.dhintyana ilahay ha unnaxariisto ameeen ..
· den 4 juni kl. 17:46
Hassan Yusuf Ali yusuf taariikh qaaliya ayaad nooga sheekaysay ALLE ha kaa abaal mariyo.
· den 4 juni kl. 20:08
Ina Ayaanle Mujaahid cali gurey…taariikhdu waa muhiim..qoraalo goos goos ihi wax weyn ma taraan markaa mujaahid waxaan jeclaan lahaa inaad isku daydid qoridda buuk ka sheekeeya dharaarahaa qalafsanaa…jadakalah kheyr
· den 5 juni kl. 05:23
Cabdi Duco Adeero, waxaas oo dhib ah waaxaas oo dhabar adayga aha maanta dalki aad u soo martay sow ma taagna meel ka liidata halki aad ka dagaalantay.
Dadka hadii jidhkooda sadexda galabnimo la xarayn jirnay maanta sow caqligodu ma xaraysan.
Tariikhda SNM waxaa…Visa mer
· den 5 juni kl. 13:27
Ahmed Muse Mohoumed Maalmo xasuusteed
· den 9 juni kl. 20:28
Husein Maxamud Rooble Mujahid khadar cali sabayse weeyi waxa walaalo yihiin suldaan mawliid sabayse waxa imika degenyhay laantqaloocan oo uu beer kasamaystay
· Igår kl. 12:05
Dawlada Sucuudiga Oo Martiqaad Rasmi Ah U Fidisay Somaliland June 12, 2017 – Written by wajaale Jirde
Dawlada Sucuudiga Oo Martiqaad Rasmi Ah U Fidisay Somaliland
June 12, 2017 – Written by wajaale Jirde
Riyadh,(Wajaalenews)- Warar rasmi ah ayaa xaqiijinaaya in dawlada Sucuudigu ay marti qaad rasmi ah u fidisay xukumadda Somaliland, waxna lagu wadaa in wafti ka socda Somaliland ay si dhakhso ah u booqdaan dalkaasi oo ay xidhiidh qoto dheeri uu ka dhaxeeyo Somaliland, ilaa hada ma cada maalinta rasmiga ah ee ay waftiga Somaliland u bixi doonaan dalka Sucuudiga lakiin ayaamahii ina soo dhaafayba xidhiidhka iyo caashaqa Somaliland iyo Sucuudigu waxa uu maraayay meel sare.
Waxana uu xidhiidhku sii xoogaytay markii doraad ay xukumadda Somaliland ay si toos ah isu garab istaagtay xulafada uu dalka Sucuudigu uu hogaaminaayo ee dalka Qatar xayiraada saaray isla markaasina xidhiidhka u jaray, xukumadda Somaliland ayaa dalka Qatar u jartay xidhiidhka isla markaasina ka mamnuucday hawadeeda iyo badeeda in ay sina u adeegsadaan.
Dhanka kalena waxa lagu wadaa in maalinta bari ah uu madaxweyne Siilaanyo iyo wafti uu hogaaminayaa ay u socdaalaan dalka Imaaraadka Carabta lamana garnaayo ilaa hada in waftigaasi ay u sii gudbi doonaan dalka Sucuudiga iyo in kale, waxna jira warar sheegaaya in dawlada Sucuudigu ay xayiraadii ka qaaday xoolihii noolaa ee uga dhoofi jiray dekada Magalada Berbera, taasi oo ay wararku ku darayaan in hada lagu bilaabi doono dhoofinta xoolo cayiman hase ahaatee marka waftiga Somaliland ay tagaan dalkaasi Sucuudiga lagu wado in si toos xoolaha ka taga magaalada Berbera looga qaado xayiraada arintaasi oo ah mid miiska u saaran dawlada Sucuudiga waxana sidoo kale la filayaa in mashaariic badan oo horumarineed ay dawlada Sucuudigu ka hir galin doonto Somaliland sanadada soo socda
Maanta Al jaziira ayaa ka hadashay Somaliland iyo mawqifkeeda. WQ: Mujaahid Cali Gurey
· Igår kl. 02:24 ·
WAMAA TASHAAUUNA ILLAA AN YASHAA ALLAH
Maanta Al jaziira ayaa ka hadashay Somaliland iyo mawqifkeeda.
Sheekadii dheerayd waxay ku soo ururisay inay sedex arin mid ahaan natiijadu noqonayso
1- Waxay ugu horaysiisay Somaliland oo ictiraaf hesha sababahana way sheegtay marka oo ay aqoonsi ka hesho xulafada maraykankuna uu ku raaci karaa ayay tidhi haduu u ku raacona waxa suurtogal ah in wadanada Afrikana mawqifkooda wax iska bedelaan waayo Somaliland xuduudaheedu waxay waafaqsan… yihiin xuduudihii isticmaariga ahaa
2. Ta labaad ee suurtogalka ahi waxay tidhi waa in dagaalo hor lihi ka soo cusboonaadaan. Sababaha may sheegin
3. Ta sadexaadna waxay sheegtay in xaaladdu sda ay tahay iska sii ahaato. Sababaha may sheegin
Waxa kale oo qaadaadhigay Somaliland maanta iyaduna wargeyska Alharaam oo isagu taariikhda Somaliland oo dhan awalow aakhir aan waxba ka tegin
Hadaba anigu waxan la yaabay in cid Somaliland iyo ictiraafkeeda danaynaysaa ay arki kariwaydo waxa ay Al Jaziira aragtay oo laga leeyahay Dalka Qadar
Ama jeclow ama necbow Ictiraafkii Somaliland wuu yimi kii ka naxayona nafta waa. Somalia iyo Somalilandna midnimo waxa ugu dhaw hadii ay ku heshiiyaan iyaga oo laba dal oo labadaba la aqoonsan yahay.
Ictiraafka Somaliland cidda hor taagnayd may ahayn cid kale waxay ahayd Carab waxana ugu darnaa Masar iyo Sucuudiga bal ka waran labadii oo khilfkan kaalinta ay kaga jiraan aynu ognahay Somaliana ay Qadar ka raacday. Anigu ma arko waddo kale oo u furan oo aan ahayn laba mid:
Inay ictiraafaan Somaliland iyaga oo ku qasban
Inay aqbalaan in Somalia hadii ay waayeen in Somalilandna ay lumiyaan iyo fursadda ay Khaliijka Cadmeed iyo Geeska Afrikaba ku hanan karaan
Hadaba xantuba ha ku baxdee miyuu jiraa mid ka mid ah xisbiyada Qaranka ee Somaliland oo ka soo horjeeda mawqifka saxa ah ee danta Somaliland ah ee tan keliya ee waajib ku ahayd inay yeesho ay ahayd ey yeeshay?
Hadii uu jiro oo ay run tahay waxa uu la mawqif yahay Dawladda Muqdisho waana nasiib darro sideeda u taal.
Abdirahid Moha Dirie Muwaadin kasta oo somalilander ahi wuu garanaya Halka ay maanta dantiisu Ku jirto waxan layaabay xisbi qaran oo horumarkasta ama waajibadkasta oo qarankani guto is hortaagaya fashilan oo fashilan taarikhda wadankena ayey ku cusubtahay in xisbi qaran ay…Visa mer
· Igår kl. 08:38
Mawliid Maxamed Adan Mustafe maazin Ader wakhti mujahidku kuumahayo khajil
· Igår kl. 10:09
Eng Abdihakim Mohamed Wa arin fiican mudane cali Lakin dawlaadan aya ah lax dhukan col iyo abaar ma oga…
· Igår kl. 10:16
Hussein Bidhidh Wadni wali wáa qadar
· Igår kl. 15:28
· den 13 juni kl. 21:29 ·
Wadaado is xushay oo danahooda isu xushay hadii ay yihiin cidda culimo ka shiganaysa ha ka dhigato. Waxay soo kordhiyaanba waa khilaaf-diineed oo ay soo dedejiyaan. Waar nin dantiisa wadaad u ah oo hamigiisa ugu wayn iyo inta cilmigiisu gaadhaaba ay aduunyo jacaykeeda ku kooban tahay sheekh ii noqon maayo eh war kale ma la hayaa
Hamud Duale med Ali Yussuf och 16 andra.
· den 13 juni kl. 19:40 ·
Cay cay dhaaftaye, geeska in la qabtaa weeyi
Mar haddii guddii culama’idiin oo dhinac ka raran, dhan loo dayaba la magac dhebe, afku ina qoloocan maayo, sidii… beryo qaarkood, la innaga dhaadhiciye, haddaynu ula doodno si cilimiysan. Qofoona fiqigii tolkaa ayaa wax la yidhi ha is odhan. Falaadh ayaa cirka loo ganayaa culimo filo.
MAWQIFKA SOMALILAND YAA U CADOW AH? WQ: WQ: Mujaahid Cali Gurey
MAWQIFKA SOMALILAND YAA U CADOW AH?
Qatar waxay taageertaa Barnaamijka Islaamka Siyaasiga ah(political islam) iyo kooxaha aaminsan ee Akhwaanul Muslimiinka iyo inta la halmaasha oo marka la isku wada daro loo yaqaano kooxaha ikhwaaniyiinta. Dawlad ahaan Qatar may qaadanin barnaamijka mana ogola inay ka hirgeliso dalkeeda balse waxay taageero laxaad leh siisaa kooxaha fikirkaa aaminsan ee dalalka kale waxanay ku bixisaa aduun aad iyo aad u badan inay kooxaha ikhwaaniyiintu ku guulaystaan xukunada dalalka kele een ahayn dalkeeda waxana ka mid ah dhamaan dalalka ku jira Jaamacadda Carabta oo ay si qaawan u farogeliso warbaahinta Aljazirana u adeegsato dacaayadaha ka dhanka ah dawladaha ka horyimi ujeedada kooxahaasi.
Waxa wax lala yaabo ah dal barnaamij aanu doonayn in dalkiisa lagaga dhaqmo hadana dalalka kale doonaya inu qasab kaga dhigo inay qaataan taas uu mararka qaarkood ku wiiqo xasiloonida iyo amniga qaran ee dalalka qaar oo gudahooda fidmo ka dhex abuuro. Dhamaan dalalka islaamka oo dhan gaar ahaana kuwa carabta ah Qatar waxay ku yeelatay nuuf ha ku kala xoog bataan eh waxanay siyaabo kala duwan u caawiyaan kooxaha iyaga sida gaarka ah ugu xidhan.
Hadaba Somaliland iyo Somalia oo ku kala leexday khilaafka Khaliijiyiinta Qatar waynu garan karnaa Somalia oo iyada uga hiikisay dalalkii kale ee Sucuudig, Imaaraadka, iyo Masar ay soo dhawaysanayso taageero bandanna ku siin doonto sidii uu Madaxwayne Farmaajo xukunkiisu dhidibka ugu aasan lahaa Somaliya, cid kalena aanay uga riixi karteen taas oo laga yaabo inay noqoto miino aasan oo mar ay noqotoba maalin qarxi doonta.Hadaba Somaliland maxay ka yeeli doontaa Qatar marka horese nufuud intee le’eg ayay ku lahayd?
Kooxaha Ikhwaaniyiinta ama Al Islaam Asiiyaasi waxa taageeri jiray dalal badan oo carbeed Qatarna mid uun bay ka ahaan jirtay. Lakiin intii ka dambaysay Inqilaabkii Madaxwaynihii ugu horeeyay ee si dimuqraad ah loogu doortay Masar wax badan ayaa iska bedelay dalalkii awal hore taageeri jiray sababtuna waxay ahayd iyadoo Ikhwaanku ay ku fashileen hogaaminta dalalkii ay iyagu gacanta sare ku yeeshii intii uu bilaabmay.
Gugii Carabtu( Rabiical Carab) oo markii hore la moodayay inu ka dhalan karo isbedel dhinaca dimuqraadiyadda dalalka carabta lakiin markii dambe ee la arkay burburkii dalalka uu gaadhay Guga Carabtu iyo hogaamintii kooxaysnayd ee dalalkii ay ikhwaaniyiintu ku guulaysteen dalalkii taageeri jiray kooxaha Ikhwaaniyiintu dib ayay uga wada gurteen marka laga reebo laba dawladood oo keliya waa Turkiga iyo Qatar eh. Sidaa daraadeed ayay kooxihii Ikhwaaniyiintu cidda keliya ey isu guureen ahayd Turkiga iyo Qatar oo iyagu weli diyaar u ahaa taageeradooda.
Hadaba sanadihii ugu dambaysay Qatar waxay bilawday dardar cusub oo cidiyo ku daqaalan ah laakiin dhinaca kale farogelin qaawan iyo ku xadgudub arimaha gudaha ee dalalka kale noqonaysa. Doorashadii Somalia ee hore iyo xataa sida ay sheegayaan wararka isa soo tarayaa doorashadii ugu dambaysay ee lagu doortay Farmaajoba waxay ahaayeen guulo ay Qatar ka soo hooysay danihii ay ka lahayd taageerada kooxaha Islaamiyiinta ah.
Dhinaca kale Somaliland kooxda wadaadadu loo yaqaan lafteedu si dadban ayay gacanta ugu dhigeen xukunka ilaa ay gaadheen heer wixii ay ogol yihiim mooyee aan wax kale ka socon karin Somaliland.
Baanankii Ganacsiga ee ka jira dalalka islaamka ah oo dhan waxay u bixiyeen Baananka Ribada iyaga oo si qaldan u fasiraya diinta sidaa daraadeed ayay xukuumadda oo beryihii dambe la odhan jiray way ka go’an tahay furista ansixinta sharciga Baanka Ganacsigu ay hadan ku dhici kari wayday inay mel mariso waxan sabab u ahaa kooxda awooda badan ee kooxdaneedka ah.
Ta labaad gudiyada loo magacaabo xiliyada abaaraha qof in iyaga lagu daro aan ahayn kooxdooda ma ogola waayo fii shii wax ay qarsanayaan oo gar ah ayaa sida ay u maalulaan qaraamaadka loo ururiyo dadka tabaalaysanna isaga sheekayn mayno.
Waxay gaadheen inay loo ogolaado in keligood ay iyagu yihiin culimada Somaliland. Waxa ugu dambeeyay Golalaha Culimada Somaliland iyaga ayaa is magacawday madaxwaynaha waa laga saxeexay laakiin kolay cid uun baa liiska soo diyaarisay laga yaabo inay Wasaaradda Awqaaftaba tahay. Durtaba cabashooyinka ka soo baxayna waynu ognahay.
Dadka xogogaalka ahi waxay sheegayaan in ilaa 80 masaajid iyo tiro ka sii badan oo mdrasado ah ay toos ugu xidhan yihiin mucaawimada Qatar xataa gaadiid ay ugu deeqday mushahar joogto ahna siiso hadii ay jirto ma hor ilaahay baa mise maaha? Wakhtigan xaadirka ah in laga shakiyaa maaha wax lala yaabi karo.
Waxynu ognahay in mawqifka xukuumadda cidda ugu badan ee ka soo horjeedaa ay yihiin kooxda wadaadada loo yaqaan oo la ogyahay awood bandan ey ku leeyihhin go’aamada Haya’daha Dawladda ee Sharci dejinta iyo fulintaba. Sidaa daraadeed nufuuda Qatar ay ku yeelan karto Somaliland maaha wax la yaraysan karo, in maalin dhaw khudaha Jimacaha aynu ka maqalo wax aynaan uga fidhiyna waa laga yaabaa oo hadii ay doonaan yidhaahdaan ICTIRAAFKU WAA XAARAAN, Go’aankii xukuumaddu sax muu ahayn, waxay u hiilisay kuwii Yuhuudda raacay iwm
Si kastaba xaalku ha ahaado eh xukuumaddu way asiibtay go’aanka ay ku taageertay xulafada ka dhanka ah Qatar sidii ay uga midho dhalin layddna waa looga fadhiyaa. Sidaa daraadeed Somaliland muxaafid iyo mucaarid waa in lagu taageera ishana lagu wada hayaa kuwa la inagu dhex beertay ee aan shacbiga Somaliland la danta ahayn ee danaha gaarka leh.
Ugu dambaystii Culimada Ahlu sunna Wal Jamaaca ee ay takooreen way ka badheedhi karaan inay xukuumadda ku taageeraan mawqifka ay qaadatay lakiin kuwa ay hoosta soo gashatay kuma dhacaan inay mawqifka xukuumadda Somaliland taageeraan oo Khudbada Jimcaha oo kolba waxay iyagu doonaan ku cambaareeyaa ku taageeran haday karaan ha ina maqashiiyaan cododkooda iyaga oo taageeraya mawqifka xalaasha ah ee Xukuumadda Somaliland. Hadii taa laga helo waa inaga hadii kale inaga maaha ee inta ay goori goor tahay ha laga tashado
Abu Salman Sadik Mujaahid Cali wax badan baad kasoo sheekaysay guntii iyo gunaanadkiina waxaad kusoo goysay in dhawaan Somaliland gudaheeda ay dhici karayso in lagu kala aragti duwanaado. Bilxaqiiqatana waa leedahay saansaanteedii lkn mid ku darso ilaa hadda Qadar isma…Visa mer
· 15 tim
Ali Yussuf har svarat · 2 svar
Mawliid Maxamed Adan Mujaahid cali maxamed yusuf cali guray ilmo xaal Adeer siwanagsan baan ulasocdaa qoraaladaadan miisaaman waxan kuu marag furayaa inay qadar dad ushaqeyaa halkan inala joogaan oo aykusoo hagajiyaan mashruuca ay qadar doonayso inlagu fuliyo hadaba caliyo…Visa mer
Ali Yussuf Hadda ayaaba lagu kala aragti duwan yahay oo cataa laga yaabaa in xukuumadda dhexdeeda ay jiraan kuwo aan waafaqsanayn laakiin aan hadli karaynini
Maxamed Yussuf Ali guray oo ma fikirba islaamnimadu mise waa caqiido diintu. Maxaadse aaminsantahay adigu ilayn mabda kale ma jiree
Ali Yussuf Al islaam asiyaasi waa barnaamij islaami ah. Diin maaha waxa laga waa Barnaamij Xisbi
· 14 tim
Ali Yussuf Hadii aanad oqoon google waydii Political Islam
Ali Yussuf Anigu waxan qoro aniga ayaa qaba cid aan ku qasbaana ma jirto. Sida aad eax u aragto qor adiguna xor baad u tahay lakkin aniga sidii arday yar oo aad macalin u tahay xaq uma lihid
· 13 tim · Har redigerats
Mawliid Maxamed Adan Yarkan maxamed yuusuf layidhi waxbaa ka khaldan sxb waxa fiican intanad waxa maskaxdaa kujira badkakeenin waxa fiican inaad fahanto mawduuca cali guray kahadlay sxb baldibu Akhriso waa iga talo
· 13 tim
Ali Yussuf Somaliland xisbi magac diimeed leh sharciga u yaalaa ma ogola. Ma diinta ayay diidan tahay baad ka dhigi. Calankeeda ayaa sheegaya oo tawxuidku ku yaalaa. Marka aad ka tagto Sucuudiga oo dalka keliya kuwa kale ee islaamka sheegtaa hadii ay ku dhici karaa bal tawxiidka calamadooda ha ku dhigan karaan
Mawliid Maxamed Adan Markaad hadlayso waxa fiican inaad hadalka caqliga soomariso dadkaqaar waxad moodaa inaylugaha soomariyaan?
Mawliid Maxamed Adan Mujaahid cali dadkashekada lawadaagaa waxbadanbay kafaa iidaan lkn waxa marmarsogala ciyalo jiri sida yarkan ookale mujaahid raali ka Ahaw qofkas ookale
Abdikarim Siyaad Jaamac calow waxkale waan kaa qaadan adeer lakiin #Bank #Ribo ah somalinad halaga furo kaa qaadan mayno. hadii qofku wax allah xaarantinimeeyay uu u aamino inuu xalal yahay diinta waa lagaga baxaa. dhowr jeer oo horena adoo ka hadlaya waan arkay ee arinkaa ribada cilmigiisa hadad leedhay aan ku dhagaysano ee soo dhig, qaala cali ma rabno #Qaala_allah wa wa #qaala_rasuulullah ayaan ka sugaynaa
· 12 tim
Mawliid Maxamed Adan Abdikarim Siyaad Jaamac sxb intaanu cali kaaga jawabin su Aasha balan inyar ka idhaahdo sxb horta ma ogtahay qoladan marna wacdiga kusheegaya ribadu waa xaaraan inay iyagu qaadan ribada tusaale waxad samaysaa labada baan ee ayleyihiin soo eeeeg labadu…Visa mer
Abdisamad Abdirahman Xaajo nimaan ogayni indhuhuu ka ridaa
Ahmed Abdi Egeh ikhwanka iyo Hamas hadi laysku haysto in aynu isla afgarano aya wanagsan,,Qatar iyo Sucudiga ha ino danbeyan inagu maxaynu ka aminsanhay Ikhwnaka iyo Hamas….Jawabta taas un ba in saxaysa hadi aynu argagixiso u aragno cadaynteda wa in la keena haday…Visa mer
· 10 tim · Har redigerats
Said Askar Arinka ugu mihiimsan ee somaliland u yaala waa maxa ka faiidaysa dhinaca aynu racaano. Carab waa carab oo waa la ogayahay in anu mel dher wax ka arag ,see landta waa in ay eegatay faiidada ay ka helayeso ,wana wajiib in wax muqada oo lagu qaniicii karo laga faiida .aqoniisiiga ugu mihiimsan ama wax u dhow.ma aha in koc lacag hesha ay faiido tahay sida Berbera .
Ahmed Abdo Gass Wadaada dhuuni qaata yaasha ah ee Somaliland afkooda dhoora una adeega dalaal shisheeye, talaabo ku haboon Dawladu haka qaado.
Moosa Yusuf Waxaad sheegto dhan warun
Hamze Qurbaawi Waa mahadsanyhy
Muj. U sheeg dadbadan oo
iska baraad la baa jiree …Visa mer
· 9 tim
Abu Xasan Cabdi Maxamed Horta kuwaa aadkatirsantay waa aljin waljamaca takale qadar waxatidhi xidhiidhkan ujaray hadana suduu wasiirka duulistu cadeeyay way isticmaalan ookaama baryayaan somalia ayaykuu haystaan marka hadaanad waxkaqabankarin inad marka horeba isku ceebayn aad iska aamusto ayay ahayd
· 8 tim
Mohamed Smail Mr ali gurey si indheer garadnimo ayaad u soo dhigtay waa run oo manta waxa jira wadankeena wadaado iskuma jiraane kuwo wadaado u eg oo qadiyada somalilandba dambi u hysta oo hadana kaaga darane wadankii ka dhex shaqysan…Visa mer
Yaxye Cumar Siciid Cali yuusuf iftiimintaada iyo hoga tusaalaha aad noogu qeexday qoraalkaagu waa mid macna wayn usamaynaya inta danta qaranka ka hormarinaysa danaha gaarka ah waxana xaqiiqo ah kuwa diinku macaashka ah ee akhwaanka loo yaqaan inay leeyihiin awood dhaqaal…Visa mer
الشيخ محمد عبدالله جامع Mujahid cali waan ku raacsanahay in qolyaha surwaal wadaadadu ay gacanta ku dhigeen dhaqalihii iyo maamulkii wadanka hadan laga hortagina maalin show aad arki iyagoo leh cidii na taageerta ayuunba islaam ah
Sida dal waliba tiisa u raacdo, Somaliland danteeda dhaqaale iyo teeda Istaraatijiyadeed ayey raacatay
· den 10 juni kl. 13:41 ·
Sida dal waliba tiisa u raacdo, Somaliland danteeda dhaqaale iyo teeda Istaraatijiyadeed ayey raacatay. Waan soo dhaweynayaa go’aanka danniga ah ee xukuumadda Somaliland ku raacday Sucuudiga iyo Imaaraadka oo dano dhaqaale iyo kuwa istaraatijiyadeed oo aan laga maarsan karin 30 sano ee soo socda ay innaga dhexeeyaan.
Dadka ku doodaya dhexnimo, ha garteen in adduunyadu dan tahay oo nin waliba tiisa ku foofo, ka garan waayana uu liico uu ciidda madaxa galiyo. Sidoo kale dadka k…u doodaya in Somaliland aaney saameyn lahayn, iyana ha garteen in Somaliland aaney u socon in ay cid wax-yeesho, se ay dan foofayso keliya.
Haddii laga tagi waayo ogow in Somaliland ay Qatar ka dhul weyn tahay kana dad badan tahay, isla markaana saameyntu ay tahay in aad miisaankaaga dhan raaciso, miisaankuna yahay baaxadda marinka dhulka iyo tirada dadka ee aad haysato hadba.
Qatar waxa aynnu isku jirnaa masaafo 6,845.2 km marka dhanka wadiiqada cirka ee ugu dhaw la eego. Waana in laga gudbo Ethiopia, Sudan, Egypt iyo Sucuudiga. Marka ay dhanka badda noqoto waa in laga gudbaa gacanka Carbeed, badda carbeed iyada oo laga soo wareegayo Indian Ocean waa in Pakistan laga soo galo. Fogaanshiyaha intaa le’eg ku darso in aynaan wadaagin xidhiidh dhaqaale.
Wax aad ka cabsataa in aaney jirin sidaa u la soco. Wax walba Somaliland ayaa ka horraysa, inkasta cadowga Somaliland uu meel walba buux dheefiyey mid gude iyo mid dibedeedba; haddana aakhirka Alle aamin ma iisho. Somaliland waa ay soconeysaa, jiraysaa oo ay waaraysaa hadba dhanka ay dantu ugu jirtana waa ay raacaysaa. Soon Wanaagsan
WQ: Mohamed Hagi Mohamoud
Make Make Mahamod Waxaa qurux badan qofku in ka sheekyo wuu garanayo
· Svara · den 11 juni kl. 04:16
Mustafe Mohamed sxp meesha dekad la kirayn maayo oo xaqul qalin ma yaalo, xidhiidh inaga dhexeeyay oo aynu u jarnay ma jiro qatar, haddii aad eegto routka diyaaraduhu maraan ee ku beegan Somalialand wali way isticmaalaysaa Qatar Airways waayo waxay ogaalansho ka hayst…Visa mer
· Svara · den 11 juni kl. 06:58
Hussein Tubea har svarat · 1 svar
Princess Natasha Mzha allah allah caqliga hakuu siyaadiyo geesi
· Svara · den 11 juni kl. 08:40
Azhar Sharif DUCA QABE IN LA YIRAHDO LAMA SO CUMRAYSAN KARO O SHACABKA QADAR LO DIDO WAD KU TAGERAYSA SUCUUDIGA SO MAHAN???
XARAMKU MA GURI REETOOD BA MISE WA BAYTKI ILLAHAY…Visa mer
· Svara · den 11 juni kl. 13:17
· den 13 juni kl. 12:03 ·
HADDII AY HOGGAAN HAN IYO HIYI LEH HESHO, WAA AY HORUMARI OO HARAADKA HAYAAN 15 SANO AH AYEY KAGA HULEELI.
Aniga oo ka duulaya amniga iyo xasilloonida Somaliland ay haysato, hoos ugu dhaadhacaya haynta qaranka inta muuqata ee shaqaysa iyo inta aan shaqayn, baadi-goobaya hantida iyo khayraadka qarsoon ee dalka u dihin.
Isla markaana jeedaalinaya mandaqadda aynnu ku naal iyo xidhiidhka horumarinta qaran ka suura-galka ah; siyaasiyan, dhaqaale ahaan, mujtamac ahaan iyo kan ista…ratijiga ah intaba – waxa aan aaminsanahay oo aan aad ugu kalsoonahay ammuurahan:-
Haddii ay Somaliland hesho, hoggaamiye wanaagsan oo daacad ah, karti badan oo dhiiran oo aan ka biqin waxa cusub se degan oo wax naaqisha, aadna dadkiisa iyo dalkiisa ugu damqanaya oo jecel horu-socod kooda waxa aan rumays nahay in Somaliland gaajada iyo darxumada kaga bixi karto muddo dhan 15 sano. Waa se keliya haddii la helo hoggaamiye astaamahan leh.
Hoggaamiye astaamahan leh waxa aan ku xushay, waa in uu ku dhiiran karo oo uu suura-galin karo xulashada dadka inta aqoonta u leh dawladnimada iyo farsamada is-maamulka. Haddii la helo Madaxweyne u badheedhi kara in uu raadiyo oo uu maamulkiisa ku dhiso inta aqoonta leh ee dammiirkooda waddaniyadeed saaloon yahay dalkani si weyn ayuu u hinqan oo uu jihada saxda ah cagta u saari. Garo oo maanka ku hay in hore aanu jirin haddana jiri karin dal aqoon la’aan kabta oo dhibka ka baxa.
Sababta aan Madaxweyne keliya u la soo baxay, ee aan xisbi iyo hay’aadka kale ee dawliga ah uga reebay waa in runtu tahay in dastuuriyan Madaxweynuhu awoodda dalka inta ugu weyni ee waddanka wax laga ga beddeli karaa ay la taal. Somaliland waa dal Madaxtooyo, awoodda qarankuna 90% Madaxtooyada ayey jiiftaa.
Haddii hal qof oo go’aan qaadasho fiican leh, isku kalsoon, hadaf leh oo hillinka uu u socdo ee uu geediga qaranka u rarayo yaqaan oo aan hilmaansaneyni yimaado; dalkani hore ayuu u socon xataa isaga oo aan la aqoonsan oo aan caalamka ictiraaf sharci ah ka helin.
Ha qariibsan dalkani in uu aad u horumari karo haddii uu helo cid aragti fiican leh oo ku hoggaamisa aqoon, garasho iyo daacadnimo. Ogow in uu hore uga soo badbaaday colaado hor leh oo mandaqadda ka socday, budhcad badeed, argagixiso, isla markaana uu marba marka ka danbaysay sii xoogaysanayey.
Si aad u ramaysato horu-socodka qaran is barbar dhig 2010 iyo 2017 Miisaaniyadda qaranka oo korodhay 401%. Haddii aad loo sii dadaalo oo indhaha si fiican loo kala furo, danta dalkana daacad laga noqdo guushu waa iska daba keen, horumarkuna waa uu socon Somaliland na waa ay badbaadi oo ay waliba dad iyo duunyaba badhaadhi. Fadlan hoos ka akhri miisaanayadda 2017.
Abdifataah Bakeyr WayraxHogaamiyahuhu , waa waxa wadana, guul u horseeda , EE kor u qaada , horumarka wadankiisa, mid dawladnimo iyo mid dadnimba , ama waa hogaamiye wadankiisa hoos u daadajiya EE hoos idhac , dhaqale mid horumar ba gadaal u sii socdaan ,
Mohamed Hagi waa…Visa mer
· den 13 juni kl. 13:27
Mohamed HagiAbdifataah Bakeyr Wayrax waliba ku darso in ay Somaliland tahay dal Madaxooyo, haddii ay hoggaan fiican oo halkaa fadhiista hesho, astaamahiisana daacadnimo iyo lexejeclo fiican yihiin dalkani waa uu kaban oo uu hore u socon. Soon wanaagsan.
· Svara · den 13 juni kl. 13:29
Duaale DahirAbti dhaqaalahaa kordhay dadkeenu ma aanay arag shaqo , baahida iyo darxumadu waa mid si cad dadka uga muuqata tusaale maanta haddii aad tegto magaalooyinka waaweyn ee hargeisa burco iyo borama wallahi ilmo ayaa kaa daadanaysa baahida jirta, sannad ka…Visa mer
· Svara · den 13 juni kl. 14:09 · Har redigerats
Mohamed AbdirashidLacagtani waxay u baahantahy Maarayn.
· Svara · den 13 juni kl. 13:52
Barkhad HassanWaliba 5tan sano ee socda waxaan rajaynayaa in hadii intaa aad sheegtay Iyo sida rajada iyo yuhuunta dadkuba tahay laysla helo uu isbadal wayni imanayo .
Nasiib badanaa sanadkaa maanta ah ninka ilaah u calmadaa !!…Visa mer
· Svara · den 13 juni kl. 14:00 · Har redigerats
Bile Hassan XaduuriMaansha allah,waa talo wanaagsan. Mohamed Hagi.waad ku mahadsantahay
· den 13 juni kl. 14:36
Jaalle Sharmarke Cabdi IbrahimWaa talo aad u fiican oo dalka weyn u taraysa haddii lagu dhaqmo walal. Anigu shakhsiyan waxaan qabaa haddii saddex shay la sameeyo inaynu meel aad u dheer gaadhi karno. Saddexdaas shay waxay yihiin.
1: ku dhaqanka dastuurka…Visa mer
· den 13 juni kl. 14:46
Suleman MeigagWaxaa la yiri guul ba guul bay soo jiidaa, horumarna horumar kale ayuu soo jiidaa. Waan hubaa inuu hogaamiye fiican dadejin karo horumarkaa.
· den 13 juni kl. 15:10
Abdirahman GooxHaa waa run Mohamed Hagi. Waxa keli ah loo baahanyahay hogaamiye fiican oo ay Ka Go,an tahay in wax ka bedelo nolosha dadkeena iyo maamulkeena dawliga ahba, waxba yaan laysku mashquulin ictiraaf waayo marka aad wax noqoto ictiraafku degdeg buu u iman.
· den 13 juni kl. 18:55